Lufthansa, SWISS neAustria Airlines vachange vachipa chikafu nezvinwiwa muEconomy Class muna 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa, SWISS neAustria Airlines vachange vachipa chikafu nezvinwiwa muEconomy Class muna 2021
Airlines • Austria Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Switzerland Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • Germany Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Munguva yemberi iri pedyo, Lufthansa, SWISS neAustria Airlines vachange vachipa g vatengi vavo mhando nyowani yemasevhisi muEconomy Class. Kutanga muchirimo 2021, vafambi munzira pfupi nepakati-pekufambisa vanozokwanisa kutenga yakasarudzika yezvikafu zvemhando yepamusoro uye zvinwiwa zviri mubhodhi kuti zvienderane nezvavanoda.
Yepamusoro mhando zviyero zvinoitwa mune nyowani renji kubva kusarudzo kusvika kugadzirira uye mharidzo. Nechirevo chitsva, ndege dzendege dziri kuisawo zvakanyanya mukuchengetedzwa nekusarudza zvigadzirwa zvine hunyanzvi uye kurongedza uye nekudzora marara echikafu kuburikidza nekugadzirwa kwakawanda.
"Yedu yazvino chikafu chinodyiwa muEconomy Class hachiwanzo sangana nezvinotarisirwa nevaenzi vedu," anotsanangura Christina Foerster, Nhengo ye Executive Executive Lufthansa Group inoona nezve Vatengi, IT & Corporate Mutoro. “Chipo chitsva ichi chakagadziriswa nekuda kwemhinduro kubva kune vatengi vedu. Nechipo chemhando yepamusoro chiripo chekutenga, vatakurwi vedu vachakwanisa kusarudza zvavanoda kudya nekumwa parwendo rwavo. "
Rudzi rwechikafu nezvinwiwa zvichave zviripo kubva kune imwe nendege nendege dzakasiyana siyana, mamwe acho achange aine mareferensi ematunhu. Iko kutarisisa kuchave pane zvigadzirwa zvitsva uye kusarudzwa kwezvikafu zvishoma. Iyo yakajairwa, yekudyira yekudya haichazopihwa mune ramangwana.
Chipo chitsva ichi chichaunzwa muzvikamu kubva mugore ra2021: Austrian Airlines ichatanga, ichiteverwa neSWISS neLufthansa; zvigadzirwa zvitsva zvinoratidzwa nehumwe nendege mumwedzi iri kuuya.